Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် ဂန္ထဝင်စက်ဘီးဘဲလ် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ဂန္ထဝင်စက်ဘီးဘဲလ် ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
JANG HORNG ENTERPRISE CO.,LTD. တွင်တည်ရှိသည် Taiwan။ ကျနော်တို့၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ရာတွင်ပါဝင်နေတဲ့ professional စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ ဂန္ထဝင်စက်ဘီးဘဲလ်။ ကျနော်တို့အမြဲပြောင်းလဲနေတဲ့စျေးကွက်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ထုတ်ကုန်များကျယ်ပြန့်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆောင်မှုအမိန့်ကိုကြိုဆိုကြသည်။ ကျနော်တို့ ပို. ပို. အတန်းမြင့်ထုတ်ကုန်များထူးချွန်ဝန်ဆောင်မှုဈေးအချိန်နှင့်တပြေးညီပေးပို့အပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့နိုင်ငံတကာစျေးကွက်ရှယ်ယာပိုမိုချဲ့ထွင်ကြသည်။ ကျေးဇူးပြု ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုသည့်အချိန်တွင်မဆို။
ပုံစံ - JH-909BB/JH-909CP
ထုပ်ပိုးသည်:1 pc/PE,10pc/box 200pcs/ctn.၂.၂ အုပ်.
22MM Pipe Handlebar အတွက်စက်ဘီး Ring Ring Accessory
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bike-bell.com/my/classic-bike-bell.html
ဂန္ထဝင်စက်ဘီးဘဲလ် ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုစျေး ၀ ယ်ပါ။ ဂန္ထဝင်စက်ဘီးဘဲလ် ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ချိသူ ဂန္ထဝင်စက်ဘီးဘဲလ် ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan